Linus Torvalds: "Uma maleynayo in qof walbaa uu barto qorida code" | Laga soo bilaabo Linux
Linus Torvalds: "Uma maleynayo in qof walbaa uu barto qorista summada"
Waqtiyadan dambe waa ku jirtaa in laga hadlo baahida loo qabo in adduunka la baro barnaamijka (siiba caruurta). Waxay ka hadlaan akhris-qoris cusub, si kor loogu qaado isticmaalka firfircoon ee aan loo adeegsan karin tiknoolajiyadda, Mashruuc xoq si aad u bilowdid (iyo mashaariicda kale ee bilaashka ah iyo kuwa furan), ololeyaal lala galay dad caan ah, iwm iwm
Iyo si lama filaan ah waxaa u jira warar sidan oo kale ah. Wareysi loogu talagalay Business Insider, Linus Torvalds ayaa la weydiiyay baahida loo qabo in la baro barnaamijyada qof walba iyo waxa uu noqon doono waxbarashada sayniska kombiyuutarka. Tani waxay ahayd jawaabtiisa (waxaa laga turjumay CHW).
Xaqiiqdii, uma maleynayo in qof walbaa isku dayo inuu barto qoritaanka nambarka. Waxaan u maleynayaa in barnaamijku yahay wax si gaar ah takhasus u leh; qofna runtii ma filayo in aqlabiyadda ay ku khasban yihiin. Tani ma aha sida loo yaqaan sida loo akhriyo loona qoro; iyo ogaanshaha sida loo sameeyo howlaha xisaabta aasaasiga ah.
Taasi waxay tiri, waxaan u maleynayaa inay jirto dariiq ay dadku kula xiriiraan, si ay u ogaadaan inay ku raaxeysanayaan iyo inay leeyihiin karti, inay wax ka ogaadaan suurtagalnimadaas. Maaha in qof kastaa doonayo ama u baahan yahay inuu wax barto, laakiin keliya maxaa yeelay waxay leeyihiin wicitaan weyn. Waxay noqon kartaa inay jiraan dad badan oo aan waligood xaqiiqsan inay jeclaan lahaayeen inay 'u sheegaan' kombiyuutarada waxa la sameeyo. Marka, macnahaas, waxaan u maleynayaa in koorsooyinka kombiyuutarka ee iskuuladu ay yihiin fikrad aad u fiican, laakiin ma aaminsani hal ku dhigga ah “Qof walba waa inuu barto barnaamijka!
Fikradayda. Waxaa laga yaabaa in waxa loo baahan yahay in la barto aysan ahayn barnaamij adag laakiin waa qaab algorithmic ah oo feker ah, in wax walbo loo wajahdo sida joogtada ah ee leh doorsoomayaasha iyo shaqooyinka. Markaa baahida loo qabo in mushkiladda si hufan loo xalliyo ayaa noqota horumarinta caqliga saliimka ah. Waxaan xasuustaa markaan caruur ahaa, iskuul aad u da 'weynaa 286 waxaan isticmaalay barnaamijka Logo (waa maxay maalmahaas, barnaamij sawir ah oo leh qoolley). Maanta waxaan arkaa xoq iyo waxa kadis ah, waa sii socoshada Logo hore (Runtii waxaa dhiirigaliyay Logoblocks, oo ahaa luuqad barnaamij muuqaal ah oo iskuxirta Logo iyo Lego blocks). Xitaa way sameeyeen jilitaan jilicsan logo oo waxaa i buuxsamay hilow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Linus Torvalds: "Uma maleynayo in qof walbaa uu barto qorista summada"
Waxa ugu fiican ee ardayga iskuulku noqon karaa inuu barto Linux iyo wixii ku saabsan howlaha aasaasiga ah ee barnaamijyada, inta soo hartay ayaa imaan doonta marka lagu daro, barnaamijyadan maalmahan waxay leeyihiin goob ballaaran sida Robotics, Process Automation iyo Fududeynta Hawlaha Soo noqnoqda ee lagu soo bandhigo kiisas badan oo laga qaado nolosha ardayga ...
Iskuulkeyga dowladu waxay siisay PC Ubuntu (horeyba waan u ogaa) waana ku faraxsanahay inaan sugo saacad kumbuyuutarkeyga inuu yimaado iyo markaan ogaaday in kombiyuutarada ay horey u lahaayeen W7, waa maxay niyad jab 🙁
sayid yeey dijo
burcad badeed hubaal
Jawaab Mr. Wolf
Markii aan ku jiray dugsiga sare (Chile), waxaa jiray fasal kombuyuutar oo gaar ah ... oo aan dhaafsiisnayn barashada qaybaha aasaasiga ah ee PC, ka dibna ku xirnaanshaha zsnes. Goor dambe oo kuleejka ah, waxaa jiray qaabkii ugu horreeyay ee loo maro Linux, iyada oo loo marayo koorsada kombiyuutarka - barnaamijyada ee C ++ -, marka hore Windows iyo kadib kombiyuutarada isticmaala Fedora. Waxa aan ogaaday markii aan ka gudbay waaya-aragnimadaas ayaa ah in ay jiraan la'aanta fasalo kumbuyuutar oo "culus" (gaar ahaan heerarka sare iyo kuwa sare) si loo helo saldhig wanaagsan, ha ahaato barnaamijyada ama garashada Linux. Nasiib darrose, ugu yaraan halkan Chile, ma jiro dhaqan jilicsan. Bilaash waxaadna heysataa 2 ikhtiyaar: ku sii soco Windows-ka ama adoo kaligaa barta dunida Linux (tan labaad ayaa igu dhacday aniga),
runti waa run sidaa darteed waa chile.
Ku jawaab crackoscl
In Peru, waa isku mid, isla markii aan ku jiray machad farsamo oo heer sare ah ayay na breen Visual Basic 6.0, badankood waxay mareen koorsadii xoqitaanka, iyo barnaamijyada ku saabsan C ++, waxaan ka mid ahaa kuwa faro ku yar ee fahmi kara barnaamijka. C ++ isla markaana gacanta ku haya waxyaabaha aasaasiga ah (in kasta oo runtu tahay, inta badan qulqulka qulqulaya ayaa aad ugu yimid iyaga, markaa sababta ay u lumeen).
Sababo jira awgood, looma baahna in qof walba lagu qasbo inuu ka qaybqaato barnaamijyada, maxaa yeelay waxaa jira dad leh noocyo sirdoon oo kala duwan oo soo rogaya shaqo aan iftiiminayn caqligooda caqabad ayey ku tahay iyaga oo aan laga soo kaban.
Uguyaraan waddanka (Venezuela) dugsiga sare waxaa ka jiray fasal ikhtiyaar u ah in la qaato: »Computing and Informatics». Bilowgii waxay ahayd uun ogaanshaha qaybaha kombuyuutarka iyo qaab dhismeedka OS. Kadib waxay na bareen adeegsiga iyo rakibida GNU / Linux (Debian), isla markiina waxay na bareen sameynta algorithms aakhirkiina waxaan kuqornay barnaamijyo yar yar oo kuqoran luqada C. Kadib waxkasta oo kale oo aan ka bartay Barnaamjiyada waxaan bartay naftayda iyo qaarna waxyaabo kale oo kuleejka ah.
Ku jawaab Martin C
Dugsi noocee ah iyo gobolkee? Sababtoo ah waxaan ku siiyay kumbuyuutar (ama halkii, xafiiska otomaatiga) dhowr iskuul oo aan waxba aheyn, manhajku waa «kani waa kormeer, kani waa rinji, kani waa CPU» ... ma jiro dugsi heer kasta oo ay yihiin gabi ahaanba wax barnaamij ah ma bixiyaan , Kuwa ugu dhow ee aan ku guuleystey inaan arko inay ii ogolaadeen inaan ku siiyo qalinka waxay ahaayeen algorithms.
Waa run, dhowr dugsi sare, waxaa kujira xusida sayniska kombiyuutarka, halkaas oo ay ku barayaan waxyaabo kala duwan, oo ay ku jiraan barnaamijyada, gobolka Zulia, waxaa ku yaal dhowr dugsiyo sare oo sidan oo kale ah. Aniga oo aan xusin CCS-ka weyn ... laakiin marka la eego maqaalka, waxaan la wadaagayaa fikradda ah in QOF WALBA waxbaran karo, laakiin qof walbaa ma garanayo sida wanaagsan ee barnaamijka loo dhigo. Farxad
Ku jawaab Fenriz
U Adkaysiga U hogaansanaanta dijo
Haa, waddankeyga aniga oo ixtiraam mudan, markaan waxbadan qaadaneyno sayniska kombiyuutarka, uma aragno maaddo aad muhiim u ah in si qoto dheer loo barto laakiin sidoo kale muhiim maahan in wax laga barto waxkastoo ku saabsan barnaamijyada hadaanay aheyn aasaaska horeba. waxay kuxirantahay 1 hadii aad jeceshahay barnaamijka waa cuni kartaa maktabad sida ugu wanaagsan wax loo barto
PS: qof ayaa wax ka yaqaana taleefannada gacanta ee casriga ah ee leh qalliin aan ka ahayn midda loo yaqaan 'android' sababta oo ah 'android' runtiina waxbey ku dishaa bilig dhalaal iyo fayras ayaa caawiya ..
Kajawaabida U Adkaysiga Soo Gudbinta
In kasta oo aan ku sii socdo mawduuca Chile, waxaa jiray waqti aanan haysan PC (aad u liita, waan ogahay) oo ay ahayd inaan aado xarun faneed (wax u eg internetka, laakiin u jiheysan maktabadaha) ee dowladda si aan u qabto shaqadayda dugsiga . Waxaa jiray laba qol, mid qaali ah oo had iyo jeer laga buuxiyo Windows XP PCs (runti wax walbo waxaa kafaala qaaday Hay'adda Bill iyo Melinda Gates Foundation) iyo mid kale oo aan si fiican loo aqoon. Waxay hayeen wax la yaab leh rakibay, waxay ahayd wax la yiraahdo "Mandrake Linux 10" waxaanan arkay in tan iyo Firefox ay ka dheereeyaan XP iyo Explorer (ma jirin kumbuyuutar kale oo ku shaqeeya Windows PC-yada qolka kale). Halkaas ayaan kula kulmay Linux waxaanan noqday mid xiisaynaya adduunka. Ahaa 10.
Qolkani wuu baaba'ay markii Michelle Bachelet ay la wareegtay xilka madaxweynenimada, waxay horey u haysatay PC waqtigaas, oo ay ku jirtay sheekada quraafaadka ah ee Mandrake ee aan kor ku soo sheegnay. Kadib waxaan aadayaa xarun faneed kale waxaana jiray kumbuyuutarro isku mid ah, laakiin wata Windows XP. Waxqabadka ayaa ka liitay.
Fasallada kombuyuutarka ayaa ahaa kuwo xiiso badan. Waxay ahaayeen kumbiyuutarro kumbuyuutarro ah oo XP ah oo waxaad samayn jirtay oo dhan waxay ahayd adeegsiga barnaamij la yiraahdo «La plaza» ( http://www.enlaces.cl/v3/internet/plaza.html ) ee barnaamijka Links. Waxay ahayd kaftan, sidaad u aragto oo waqti dheer naguma qaadan inaan qiyaasno furaha si aan uga baxno qaskaas, waxay ahayd "xiriiriyeyaal." Halkaas waxaan ugu baxnay PC-ga dhabta ah. Kadibna waxay na bareen inaan adeegsanno softiweer gaar ah (MS Office) iyo adeegsiga Internet Explorer. Markii aan borofisarka ka wareystay Linux, wuxuu igu eegay weji "kani waa haakar", hahaha.
Kadib dugsiga sare, inbadan oo isku mid ah. Waxay siiyeen cunug boorash markii aan filanayay hilib.
Waxaan ka bilaabay DuocUC barashada Programming Programming mana ah raad kaliya oo Linux ah ilaa semesterka 4aad, halkaas oo ay ka jirtay laan la yiraahdo "Maamulka Nidaamyada Howlgalka", oo macalinkoodu yahay Linuxer. Laakiin "barnaamij ahaan" (waa eray si ballaadhan looga adeegsado Chile si loo muujiyo xaddidaadda waxa ay bari karaan), kaliya RHEL 6 ayaa dhaaftay (Red Hat waa lammaane hay'adda). Laamaha barnaamijku waxay ku wada yaalliin deegaanno Windows ah waxayna adeegsanayeen barnaamijyo lahaansho (Visual Studio, Oracle DB Designer) macallinkuna isla markiiba wuu caddeeyay: Dib uma eegi doono shaqadii laga qabtay MonoDevelop. Qalabka wax lagu barto waa Visual Studio.
Iyo meesha aan ka shaqeeyo, waxaad aragtaa cawaaqibka waxqabadka oo dhan ee Windows. Kombiyuutarada oo dhami waa Windows 7 (meesha aan tan ka qoro), adeeguhu waa Windows Server 2003, boostadu waa isdhaafsiga iyo soo dhaweynta shirkada waxaa la i siiyay Lync. Waxaa jira kaliya hal Ubuntu PC, waxayna u heellan tahay inay soo bandhigto xayeysiinta dukaanka shaashadaha.
Waad salaaman tihiin, waan ka helay aragtidaada, waxaan isku barayaa sida;
Resistance to Submission ajajja Sidoo kale waxaan ku garanayay Linux si lamid ah taada waxaan ku aqaanay taleefanada gacanta midabkeedi hore waxaan helay motorola KRZR K1 waxaan haystay nidaam ay samaysay Linux ama wax la mid ah taleefoonkan gacanta ilaa ay wax walba usocdaan ereyo kale oo websaydh ah ayaa leh waxkasta oo leh xD hahaha dhowr jeer ayuu gacantayda ka soo dhacay waligoodna ma iftiimin ama virus ma helin, waxa kaliya ee xumaa waxay ahayd inuu hore u duqoobay oo ay ahayd inaan nasiib daro ku iftiimiyo android iyo sheekada caadiga ah. fayrasyada waa la demiyey oo la shiday ilaa 1 saac
taasi waa sababta scrivo yaa garanaya ama qof iga caawin karaa inaan helo taleefan casri ah oo leh nidaam hawlgal oo bilaash ah 😉
Android waa nidaam hawlgal furan oo furan …………… ..
Tusaale ahaan waxaad raadsan kartaa caado Android ROM ah (sida Cyanogenmod ama Replicant) si aad uhesho taleefanka.
Anigu waxaan ahay mid ka mid ah dadka doorbidaya in wax laga beddelo tifaftireyaasha sida EMACS, laakiin waxaa jira dad jecel inay wax ku bartaan barnaamijka sida Logo ama tifaftire kale oo muujiya sawirada walxaha sida astaamaha la soo sheegay ama loo maro waraaqaha socodka.
Wixii Linus Trovals sheegay waa 100% sax, maaddaama ay jiraan dad heer sare ka gaaray dhinacyo kala duwan oo lagu soo rogo barashada luuqad barnaamij ayaa xaddidi kara halkii laga sii ballaarin lahaa.
Hadda, waxa ka maqan barnaamijka bilaashka ah iyo ilaha furan waa naqshadeeyayaasha GUI, sidaa darteed waxaa kaliya lagu dabaqayaa iyada oo ay ugu wacan tahay eOS iyo Linux Mint.
Looma baahna in qof walbaa ogaado sida wax loo barto, laakiin haddii ay fiicnaan lahayd haddii ugu yaraan dugsiyada la dhigo, waxay barteen qaar ka mid ah "Programming Logic".
Nooca sida barashada xisaabta aasaasiga ah. Qof walba waa inuu barto xitaa sida wax loo kordhiyo ama looga jaro. Laakiin qof walba maahan xisaabyahan ... Hagaag, waa isku mid barnaamijyada.
Kadib, haddii aad jeceshahay oo aad rabto inaad ballaariso, waad baranaysaa.
Waxaan jeclaan lahaa inay iyagu i bareen aasaaska markii aan waxbaranayay. Hadda waa inaan keligey barto, dabcan wax badan ayaa iga galay.
Jawaab José GDF
Sep, runti dugsi waxaan u soo jeediyay in aan si fudud u baro algorithms-ka iyo been-abuurka, si aan ugu baro wax ka sarreeya «sida kombiyuutarka u fikiro» ... waxay ii soo direen inaan qariyo, «waa ku badan tahay wiilasha».
Kula heshii Elav. Haddii la bari lahaa Cilmiga Xisaabta, hubaal in wiilashu ay si kale u fekeri lahaayeen.
Laakiin kaliya maahan inaad barato P ama Q markaa R.
Haddii kale, waxay ku bari doonaan isku dhiggooda Boolean Algebra.
Haddii qof kastaa barto barnaamijka, barnaamijyayaashu waxay noqon lahaayeen kuwa adduunka ugu kharash badan, waxayna si weyn u saameyn doontaa xirfadda.
Waxay u muuqataa inuu ka baqayo in ilmuhu wax isaga ka fiican sameeyo!
Ku jawaab oscar
Waxaan u maleynayaa in haddii dugsigu uusan u jihaysan xagga xisaabinta, aysan u baahnaan lahayn in qof walbaa ogaado sida wax loo barto. Waxa jira dhadhammo kaladuwan oo xagga xirfadaha ah.
Laakiin way fiicnaan lahayd, tusaale ahaan, in la sameeyo barnaamijyo ama aqoon isweydaarsiyo, iyo waxyaabo kale. Sidan ayaa mashruuc yar la isugu keeni karaa: ragga ka socda aagga barnaamijku waxay abuuraan codsi; kuwa naqshadeynta, astaanta; kuwa kale dukumiintiyada, codadka, iwm.
Tani waa sida ay u bartaan inay u shaqeeyaan koox ahaan, mid walbana sida ay u jecel yihiin. Waxay bartaan macnaha "Software-ka Bilaashka ah."
Hagaag, dugsigayga "barnaamijyada" waxaa loo fahmay isticmaalka VB6 iyo algorithms. Waxaan u maleynayaa sababta oo ah waxyaabahaas oo kale, oo ku saabsan asxaabteydii hore, kuwa wax ka qabtay wax ku saabsan xisaabinta waxaan ku tirin karaa hal gacan (iyo hal injineer nidaam kaliya). Waxaan door bidayaa nidaamka jaamacada, oo marka hore caqliga lagu barto, a. xisaabta, sayniska kumbuyuutarka waxay ku bilaabaan C, marba marka ka dambaysana way horumariyaan
Waan ku raacsanahay Torvalds, ogaanshaha sida wax loo barto maahan baahi aasaasi ah. Haa, waan jeclahay barnaamijka, waxaanan u arkaa inay waxtar badan leedahay, laakiin uma arko inay baahi u tahay tirada badan ee dadweynaha.
Waxaan u maleynayaa in barashada barnaamijka ay leedahay laba faa iidooyin waaweyn: Waxay ku baraysaa inaad si macquul ah ugu fikirto qaab aan la taaban karin, waxayna ina baraysaa in kumbuyuutarradu yihiin doqonno, waxay naga qaadayaan sawirkaas ah in kumbuyuutarradu yihiin sanduuqyo sixir ah oo wax walba sameeya, laakiin dhab ahaantii Way sameyn karaan wax kasta oo ay sameeyaan maxaa yeelay qof ayaa iyaga barnaamij ka sameeyay (qodobkan u dambeeya wuxuu umuuqdaa mid muhiim ah, waqtiga ay Terminators-ku bilaabanayaan inay muuqdaan iyo waxyaabo la mid ah, waxaan ogaan doonnaa inay yihiin mashiinno carrab la 'aan annaga abuuray, oo haddaan abuuri karno waan baabi'in karnaa: D)
Ku jawaab Sironid
Wax yar ka hor bil ka hor waxaan bilaabay horumarinta mashruuc tijaabo ah "Baridda barnaamijyada carruurta", sida aan ku sheegay qoraal sababay waxoogaa khilaaf ah dhawaanahan, waxaan ahay macallin dugsi hoose ka dhiga Machadka Antonio Peña Celi ee magaalada ee Loja - Ecuador, oo ah hay'ad gaar loo leeyahay, markii ay timid ururka FLISoL (oo aan qayb ka ahaa), waxaan la yeeshay wadahadalo hordhac ah oo ku saabsan Software-ka Bilaashka ah iyo badqabka baafinta Internetka ee ardayda iyo mararka qaarkood maamul ahaan ikhtiyaari ahaan (Ka qaybgalka kuwa kale xubnaha bulshada).
Tan iyo bishii Diseembar waxaan ogaa xiritaanka Windows XP ugu yaraan taageerada farsamada ee Microsoft. Tan iyo markaas waxaan u sheegay agaasimaha warkan wanaagsan waxayna i siisay dhammaan furfurnaanta si aan u baro Software-ka Bilaashka ah.
Maalintii FLISoL, ardayda qaarkood oo aan casharro u dhigayay, waxay ku baxeen si iskaa wax u qabso ah waxayna i raaceen maalintii oo dhan (Iyadoo ay fasax ka haystaan ​​waalidiinta dabcan). Waxaan xaqiiqsaday wax aad muhiim u ah, markii aan kaligood iskaga tagay oo aan usocday inaan sawiro kaqaado munaasabada laftooda oo kusalaysnaa fasalka Software-ka Bilaashka ah ee mararka qaarkood ee aan siiyay iyo wadahadalada ay heleen, waxay bilaabeen inay u sharaxaan kaqeybgalayaasha in Waa Software Bilaash ah, waxaan ahay isticmaale Archlinux ah fasaladaydana waxaan inta badan mashiinkeyga kala soo baxaa howlaha maalinlaha ah (Shabakadaha Maamulka, Akhriska, Twitter, iwm.), Waxaan u isticmaalaa Archlinux oo leh Awesome maamule daaqad, waxaan la yaabanahay inay ka tageen mashiinka farsamada leh Edubuntu Iyaga ayaan u guntaday inay ku dhaqmaan waxayna dadka u sharraxeen Software-ka Bilaashka ah ee ka socda Archlinux-kayga oo wata 'Awesome' Cajiib ayaan is iri.
Markii xubin ka tirsan hay'adda oo khabiir ku ah amniga kombuyuutarka kana shaqeeya Bangiga Qaranka ee aaggaas uu u dhowaado (Jorge Guerron), mid ka mid ah ardaydayda ayaa u sheegay inuu iska ilaaliyo in markuu weynaado uu ka taxadari doono soo degsashada goobta. asaga oo abuura dhibaatooyinka qaar, ardaygaygu waa 10 jir oo keliya, magaciisuna waa Martin oo halkii uu ka weerari lahaa Jorge, waxa ugu horreeya ee aan kula talinayo waa inuu barto barnaamijka si loo gaadho hawshaas.
Tan iyo markaas waxaan bilaabay inaan ku baaro kiisas la mid ah webka iyo dhammaan kiisaskii Hackers-ku ay ku barteen barnaamijka laga soo bilaabo da'da hore.
Anigu ma ihi barnaamij (weli), laakiin waxaan xiiseynayay mowduuca oo bilaabay raadinta macluumaadka, waxaan helay qalab Software oo Bilaash ah oo ii oggolaaday inaan baro barnaamijyada ciyaaraha (Stacks - Engine iyo Scratch)
Xirmooyinka - Mashiinka: Waa qalab lagu dhiso ciyaaraha fiidiyowga qaab fudud oo ficil ah. Sidoo kale loo yaqaan ciyaar fiidiyoow ah "matoor" ama "maktabad". Waxaa loo sameeyay maktabad Python 2.0 ah
Xoqitaan: Waa hindisaha MIT oo ujeeddadiisu tahay in la baro cunug kasta ama qof kasta oo xiiseynaya barnaamijka iyada oo loo marayo jawi waxbarasho oo loogu talagalay firfircoonaan iyo gebi ahaanba bilaash ah
Isla waqtigaasna waxaan baranayaa oo barayaa barnaamijyada, haddii mashruucu guuleysto waxaan ku hirgelin doonaa manhajka (Hardware, Software, Office Automation, Internet, Web 2.0, Fikirka Macquulka ah iyo Barnaamijyada)
Cilladaha ugu weyni waa Horumarka Fikirka Caqliga ah maadaama carruurtu ay caadaysteen inay ciyaaraan oo keliya (Waa macquul macallimiintii hore darteed) Waxaan raadinayaa dad iga caawiya arrintaas maadaama aanan doonayn inay kaligood ku hadhaan shaqadayda iyo iskuulkayga, Kuwa doonaya inay iskaashadaan waxaan isku darayaa degelkan http://www.metodologia.aprendelibre.net.
Aad u wanaagsan dadaalkaaga, waxaan rajeynayaa inaad nasiib leedahay!
Way fiicantahay inaad sidan uga qayb gasho. Runtii waxaad beeratay abuur abuur, isla marka uu biqlo iyo caawimaadda dadaallada kale ee la midka ah, beddeli kara adduunka (runti waan aaminsanahay, ma ahan kaliya xisaabinta). Marnaba ma aaminsani nidaamka waxbarasho ee maal-gashiga hadda jira, oo ujeeddadu tahay in laguu diyaariyo inaad liqdo macluumaadka markii aad wax ka fiirsanaysidna waxaad dhibaato ku noqotaa halkii aad ka baran lahayd qof baranaya inuu walaac qabo oo jecel inuu qumbaha u rogo, taas oo ah ma aha shaqo in la sameeyo. Dad aad u yar oo aan la kulmay oo xitaa ku dhiirraday inay rakibaan Linux liveCD, tusaale ahaan, markay soo baxdo inay maalintii oo dhan ku qaataan kombiyuutarka hortiisa. Xaaladdayda waa Spain, laakiin waxay ila tahay inay tahay dhibaato caalami ah. Macallimiinta sidaada oo kale ah waxay nolosha siiyaan dadka aniga oo kale ah (Kuma sii jiro iskuulka mar dambe, laakiin taasi waa sidii ay ahayd, way yaraayeen laakiin waxay iga dhaadhiciyeen cidda mudan iyo cidda aan u qalmin, maaha dad ahaan, laakiin yaa karti u leh isagoo hal talaabo hore u sii qaadaya "qamaaraya"). Mararka qaar way adagtahay, laakiin eeg inaad nasiib leedahay oo aad hesho dad badan oo aragtidaada la wadaaga.
Marka laga hadlayo mawduuca, waan ku raacsanahay Linus, hal shay ayaa ah in la barto koodhka ama barnaamijka iyo mid kale waa in la ogaado sida nidaamkaagu u shaqeeyo iyo sida loo qaabeeyo ama loo laalo. Xaqiiqdii, waxaan hayaa fikradaha aasaasiga ah ee barnaamijyada, laakiin waqtiga runta uma maleynayo inay yihiin kuwa loo baahan yahay. Waxaan u maleynayaa taas, sida Diazepan u leeyahay, waa su'aal ka badan isbedelka maskaxda (halka fekerka dambe ama dagaalka loogu talagalay xorriyadda isticmaalka aaladda ay soo galaan). Halkaas waxay ka noqon lahayd uun waqti ka hor kii xiiseynaya jecelna inuu barto barnaamijyada
Waxaan ku kala duwannahay hal qodob ...
Barashada barnaamijka waxay kaa caawineysaa inaad barato caqli gal, qaabeyn, iyo inaad u jeesato dadka kale haddii aad caawimaad u baahan tahay, haddii aad tan ku horumarin karto ciyaarta kubbadda cagta, barnaamijka fuck = D
Lol waan ku raacsanahay
Waan kugu raacsanahay, laakiin sidoo kale waxaan hubaa in kubada cagta, heerar kala duwan, ay baraan waxyaabo badan (wax kale ayaa ah "si xun ayaa loogu dhaqmaa"), iyo in fikirka caqligalka ah lagu gaari karo siyaabo kale
Runtu waxay tahay inaan la wadaago fikradda ah in qof kasta uusan ku qasbanaan inuu barto barnaamijka. Waxaan aaminsanahay in qofkasta oo inaga mid ahi leeyahay awoodo iyo kartiyo kala duwan, dhan walba, waana inaan horumarinaa ugu badnaan. Sida iska cad, iskuulka iyo bey'ada qoysku waa meelaha lagu sameeyo waana inay jirtaa xulasho qof walba. Maahan sidii markii aan darsay tikniyoolajiyadaha iyo aqoontu (oo waxaan aaminsanahay inay sii ahaanayaan) inta badan elitist. Maanta, in kasta oo ay umuuqato mid khilaafsan waxyaalaha kor ku xusan, inbadan ayaa marin u leh oo waxay noqon laheyd mid xiiso leh in la kiciyo horumarka kartida carruurta.
Thanks @diazepan, waxaad iga dhigtay inaan xasuusto sababta aan u sido qoolley, oo laga soo gooyay raajo hore, ilaa iskuulka markasta waxay ahayd qarsoodi weyn oo soo martay. Wanaagsan 'ol times !!! Salaan.
Ku jawaab illukki
Waxaan gebi ahaanba ku raacsanahay muujinta Linus, waxa runta muhiimka ah waa barida sida looga fikiro algorithm ahaan, sidaa darteed waxaan la wadaageynaa dhamaan howlaheena maalinlaha ah aduunkan aan la taaban karin ee fikradaha matalaya talaabooyinka si macquul ah u horseedaya xalinta dhibaatada, ama xaalad gaar ah.
Waan ogolahay ... Suurtagalnimadu waa inay jirtaa laakiin kuwa doonaya inay ka faa'iidaystaan ​​...
Waxay u egtahay muusikada ... ka hor intaadan baran waa inaad hubisaa inaad jeceshahay oo aad halkaas uga dirto waxbarasho, ama sida kubbadda cagta. Gaaban, sida anshax kasta.
Waxay i xasuusineysaa fikir hore oo ahaa daraasad markii ugu horeysay tusaale ahaan "muusig" ka dibna hadaad jeceshahay, sii wad ... MAYA, waqtigaas waa inaad heshaa WAXAAD jeceshahay inaad sameyso ka dibna SAMEE; baashaal, maahan meel "rasmi ah" sida iskuul ama machad, laakiin PC, kubbad ama cajalad CD ah meel u dhow ...
Wax xumaan ah uma arko in lagu baro aasaaska barnaamijyada dugsiyada. Sida iska cad barnaamijyada barashada kumbuyuutarka / xafiiska; waa in dib loo eego lana cusbooneysiiyaa. Tani waxay ka dhigan tahay in macallimiin badani ay cusboonaysiiyaan aqoontooda iyo inay ku dhiiradaan barnaamijka bilaashka ah. Dhinaca kale, ku qasbida barashada xirfad, kuma waafaqsana ruuxa xorriyadda dhaqdhaqaaqa. Kaliya ka-faa'iideystayaasha jiritaanka tiro badan oo barnaamij-yaqaanno ah; waxay ahaan laheyd shirkadaha, maadaama shaqadooda ay aad uga jaban tahay. Yeynaan ku kadsoomin oo aan u malayno inaysan mar dambe qaadanaynin horumarka ka socda SL oo ay ku ridayaan barnaamijyadooda. Dhinaca kale, marka loo eego waxa ay dad badani u malaynayaan in marka hore aad jeceshahay ka dibna aad daraasad ku samayso; waxay illoobayaan qodob muhiim ah; haddii shay gabi ahaanba aan la aqoon macquul maaha inaad jeceshahay. Haysashada aagag waxbarasho oo kala duwan waxay kuu oggolaaneysaa inaad wax badan ka ogaato oo aad aragto waxa aad xiiseyneyso, ama waxay ka filayaan cunug inuu ogaado xirfadda uu doonayo inuu yeesho iyada oo aan lagu dhiirrigelin. Wiilkaygu wuu garanayaa Linux maxaa yeelay ku dhowaad dhammaan mashiinnada gurigayga ku yaal waxay u leeyihiin rakibidda kaliya. Marka waxay baraneysaa inay maamusho daaqadaha iyo Linuxka.
waa inuu isagu saxan yahay ... waxaad u baahan tahay inaad xirfad yeelato.
Maaddaama maqaalka uu leeyahay, waan ku qanacsanahay aragtidaas algorithmic, waa inay carruurta baraan inay sababeeyaan, oo lagu saleeyo caqli-gal, taasi waa mid aan suurtagal ahayn xilligan maxaa yeelay waxay qaadanaysaa macallimiin maskax furan oo aan diidin dhammaan fikirka dambe, Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay mid ka mid ah dhibaatooyinka waxbarashada hadda jirta, waxay diiradda saarayaan waxbarista habka ugu wax ku oolka badan iyadoo aan loo oggolaan ardayda inay horumariyaan waddooyin cusub oo macquul ah, taas oo laga yaabo inay khalad tahay laakiin waa wadada saxda ah, haddii carruurta Waxay diiradda saaraan xifdinta wixii hore loo yiqiin , Waxaan gebi ahaanba lumineynaa male-awaalkooda ballaadhan, ka dibna waxaan ka cabaneynaa hal-abuur la'aan.
waxay leedahay sabab uun. waa inaad ogaataa waa maxay barnaamijku?
laakiin ha ku qasbin inay bartaan barnaamijka
Ku jawaab jhonnyarana
Waxaan u maleynayaa inaysan daruuri aheyn in qof kastaa barto akhriska iyo qorista ama qalabka muusigga, laakiin way caawinaysaa. Ka soo qaad in qof walba barnaamij sameeyay, imisa codsi ayaan haysan lahayn, gaar ahaan haddii ay tahay barnaamij bilaash ah.
Waan sii arkaa. Ma qiyaasi kartaa macnaha ay u lahaan karto kumbuyuutarrada adduunka inay adeegsadaan Software Bilaash ah oo ay wadaagaan? Marka hore, waxaan lahaan laheyn xakameyn buuxda qalabkeena, laakiin waxay siineysaa faa iidooyin badan oo intaas kabadan. Waxay la mid tahay akhriska iyo qalabka muusigga, waxay ku baraysaa waxyaabo, xitaa haddii aadan ka warqabin, inaad la socon doonto noloshaada oo dhan, waxay beddeleysaa habka aad u maleyneyso. Taasi wax ka yar iskuulka ilmaha ku haysta kombiyuutarka guriga kuma qasbana inuu baro macallimiintiisa fasalka kombiyuutarka sida loo isticmaalo PC, taasina way dhacdaa in badan. Waa inay ka baxaan iyagoo garanaya sida loo isticmaalo kumbuyuutar si fiican, fikradaha aasaasiga ah ee barnaamijyada, haddii ay ogaadaan oo keliya sida loo sameeyo "kumbuyuutar"
Waan ku raacsanahay linenka, ka waran haddii suurtagalnimada in koodhka barashada ee carruurta la siiyo, taas waan oggolahay, laakiin maahan inay dhammaantood ogaadaan
Jawaab Emiliano Correa
Koodhku ma noqon karo, laakiin ugu yaraan ugu yaraan xisaabinta heerka isticmaalaha, maxaa yeelay dadka badankood xitaa ma yaqaanaan sida loo isticmaalo Google. waxaa lagama maarmaan u ah dadku inay si sax ah u isticmaalaan tikniyoolajiyadda, oo aan ahayn sidii sannado badan loo qaban jiray. Barnaamijku weli waa takhasus aan qasab ahayn, laakiin isticmaalka kombuyuutarka heerka isticmaalaha ayaa muhiim noqon lahaa.
Jawaab Antonio lopez del Prado
Fabian Flores Vadell dijo
Markay akhristayaashu akhriyaan fekerka noocan ah, waxay u muuqdaan inay ku dhacaan khaladaadka maamulka: haddii Linus uu yiraahdo, waa inaad tixgelisaa. Laakiin kiiskan aragtida Torvalds waa mid qiimo yar sababtoo ah isagu ma ahan khabiir waxbarasho.
Intaa waxa dheer, barashada habka loo yaqaan koodhku maaha qarniga XNUMXaad ee u dhiganta barashada ciyaarta chess. Aad ayey uga badan tahay intaas.
Sida ay dad badani muujiyeen, horumarinta fikirka caqliga iyo xirfadaha kale waxaa lagu gaari karaa habab kale. Si kastaba ha noqotee, markaad baraneyso barnaamijka waxaad heleysaa qalab ah amarro dhowr ah oo aad u xoog badan: kaliya maahan inaad baraneyso inaad ka fikirto qaab macquul ah oo qaabaysan (algorithmic), waxaad baraneysaa oo aad kobcinaysaa awoodda lagu xallinayo dhibaatooyinka, halkii , waxaad heleysaa qalab sida akhriska iyo qoraalka, aalad kuu saamaxaysa inaad ku kasbato noocyo badan oo aqoon ah oo ku jira miisaan aan aalad kale la jaan qaadi karin.
Markaad barato akhriska waxaad hagaajineysaa awoodaada inaad wax barato kaligaa maxaa yeelay waxaad heli kartaa aqoon cusub oo urursan tusaale ahaan buugaagta. Markaad hesho aqoonta aasaasiga ah ee cilmiga farsamada, waxaad hagaajineysaa awoodaada waxbarasho sababtoo ah waxaad marin uheli kartaa ilaha waxbarasho ee qoraalka iyo warbaahinta badan.
Qalabka kor ku xusan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ballaariso isha ilaha waxbarasho. Taa bedelkeeda, barashada koodhku waxay ku siinaysaa qalab yaab leh oo aad ku tijaabin karto noocyo badan oo aqoon ah. Tusaale ahaan, waad baran kartaa mowduuc xisaabta, fiisigiska ama kimistariga waxaadna qori kartaa barnaamijyo si aad ugu qoto-dheeraato aqoonta aad baraneyso.
Laakiin barashada lambar siinta waxaa ka mid ah weji kale oo aad muhiim u ah: dhiirigelin.
Markaad barato barnaamijka waxaad ogaan doontaa inaad adigu ogaan karto haddii barnaamijka aad sameysay uu sax yahay iyo in kale, uma baahnid qof kale inuu kuu sheego haddii waxa aad u maleynayso inaad ogtahay inay sax yihiin. Kani waa dhiirrigeliye cajiib ah, laakiin ma aha kan keliya.
Qodobka kale ee aasaasiga ah ee dhiirigelinta leh ayaa ah in barnaamijyadu yihiin madadaalo.
Gabagabadii, barashada barnaamijku maahan chess ee qarnigii XXI, laakiin wax badan oo intaa ka badan. Waa aalad aqooneed oo kuu oggolaaneysa inaad sahamiso, abuurto, tijaabiso, aad jilato, muujiso, taas oo ah, ABUURSIGA iyo QODOBKA aqoonta heer ay adkaan doonto in lagu gaaro habab kale.
Iyo sidoo kale, waa mid aad u dhiirrigelin leh: waxay ku siinaysaa guud ahaan kontaroolidda waxa aad sameyso iyo awoodda aad ku xaqiijin karto, waxayna leedahay awood ay ku noqoto madadaalo iyo xitaa madadaalo aad u xiiso badan.
Sidaa darteed, barashada habka loo codeeyo ayaa ah akhris-qorista cusub.
Jawaab Fabián Flores Vadell
Waad salaaman tahay, kuma raacsani fikirkaaga, ee ku saabsan «laakiin qaab fikirka algorithmic ah, inaad wax walba ugula timaado qaab caadi ah oo leh doorsoomayaal iyo shaqooyin. Markaa baahida loo qabo in mushkiladda si hufan loo xalliyo ayaa noqota horumarinta caqliga saliimka ah »… waxaan nahay dad, mana nihin mashiinno. Waxa aad soo jeedineysaa waa khatar, maxaa yeelay nidaamkaas waxbarasho, waxaad ku gaari laheyd heer taas, oo aadan u kala soocin karin nooc ka mid ah wax kasta, laakiin qaab la saadaalin karo oo loo qorsheeyay. Taasina waa masiibo, maxaa yeelay waxay siin laheyd xakameynta go'aan gaarista. Tani si uun baa hore loo qabtay, waana ujeedada xukunka aadanaha, in la xakameeyo noocyada, si looga dhigo mid sii kordheysa oo la saadaalin karo, soo rogida baahiyo iyo soo saarista ku-tiirsanaan. Way ka culus tahay waxa adiga kuu muuqda ... waxaan dhihi lahaa hadba sida ay u sii fiicnaato.
Ku jawaab matiasbatero
Sahlo hurdo gelinta Ubuntu 14.04 (iyo kuwa kale)